Etu esi emeghe faịlụ .vcf ma mezie ọdịnaya ha na uche | Gam akporosis
Otu esi emeghe faịlụ .vcf ma mezie ọdịnaya ha mgbe ochicho
You nwetụla mgbe ị mepee faịlụ .vcf ma hụghị ya?You hụla nnukwu ọgba aghara ma ọ bụ ihe siri ike nghọta okwu? Ọ bụrụ otu a, achọrọ m igosi gị ezigbo azịza maka nwee ike imeghe faịlụ .VCF ma jikwaa ọdịnaya ha n'uche, na-agbakwunye ubi ọhụrụ na kọntaktị anyị echekwara na nkwado ndabere, na-ewepu kọntaktị abụọ ma ọ bụ kọntaktị achọghị, na ọbụna iji nkwado ndabere ma ọ bụ .VCF faịlụ dị ka a ga - asị na ọ bụ ngwa Agenda dị mfe maka gam akporo.
Anyị ga-eme nke a site na iji ngwa egwu na-enweghị atụ maka gam akporo, ngwa m gosipụtara gị n'ụzọ miri emi na vidiyo nke m hapụrụ gị n'elu usoro ndị a, na nke m na-akọwa ihe niile ọ na-enye anyị na ụzọ imeghe faịlụ, VCF iji jikwaa ha na njedebe zuru oke na nke zuru oke.
Iji malite, gwa ha na anyị ga-enwe ike ibudata ngwa ahụ site na Storelọ Ahịa Google Play, ụlọ ọrụ gọọmentị maka gam akporo, naanị site na ịchọ Ndi ana-akpo VCF. Onye Mmepụta ngwa AndroLd nke dị mma nke na ị ga-ahụ maka nbudata na-aga n'ihu na njedebe nke post a.
1 Kedu ihe bụ faịlụ .VCF?
2 Kedu ihe ndị kọntaktị VCF na-enye anyị?
3 Budata VCF Ndi ana-akpo n'efu na Playlọ Ahịa Google
Kedu ihe bụ faịlụ .VCF?
A .VCF faịlụ a dị mfe ndabere gị gam akporo ekwentị akwụkwọ kọntaktị. Ndabere nke emere ma ọ bụ rụọ site na ngwa kọntaktị nke gam akporo anyị site na ịbanye na ntọala nke ngwa kọntaktị n'onwe ya na ịhọrọ nhọrọ ịbubata / mbupụ kọntaktị wee họrọ nhọrọ Mbupụ.
Na vidiyo m hapụrụ gị n'elu, na mgbakwunye na igosi gị otu ngwa ahụ si arụ ọrụ iji mepee faịlụ .VCF, m na-egosikwa gị -Esi mee ka a dị mfe ndabere gị gam akporo kọntaktị. Ya mere, m na-adụ gị ọdụ ka ị lelee ya.
Kedu ihe ndị kọntaktị VCF na-enye anyị?
Ndi ana-akpo VCF bụ azịza kachasị mma na ahịa, ya bụ, site na Playlọ Ahịa Google, ka emeghe .VCF faịlụ na-achịkwa ha na uche, na mgbe m kwuru ijikwa ha mee ihe masịrị m, m na-ekwu otu ihe, na anyị ga-enwe ike ime ma mezie ihe anyị chọrọ, na-eme ihe anyị chọrọ, ihichapụ kọntaktị, na-agbakwunye kọntaktị ọhụrụ ma ọ bụ ọbụna gbanwee kọntaktị dị ugbu a na nkwado ndabere tinye ubi ọhụrụ.
Na vidiyo agbakwunyere na m hapụrụ gị aka nri na mmalite nke post m na-egosi gị ọrụ dị mfe nke ngwa ahụ n'obi, nke ahụ bụ ịsị nke miri emi ebe m gosipụtara gị ebe m ga-ahụ nhọrọ niile nke ngwa yana yana ụzọ iji mee ka nkwado ndabere a dị mfe nke kọntaktị niile nke gam akporo anyị.
Budata VCF Ndi ana-akpo n'efu na Playlọ Ahịa Google
Ndi ana-akpo VCF
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Otu esi emeghe faịlụ .vcf ma mezie ọdịnaya ha mgbe ochicho
Javier Batalla dijo
Ọ na-egosi m njehie ma ọ naghị emeghe mgbe ọ ruru 13%, otu m si edozi ya, ọ naghị enye m nhọrọ iji dozie ya
Zaghachi Javier Batalla
Akụkụ isii mbụ nke Ulefone Gemini ga-efu dollar 6.000
Ndị a bụ nkọwa nke Galaxy TabPro S2